Shiinuhu wuxuu u iibiyaa Beeraha Beeraha badan ee Warshadaha Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
u iibso Beeraha Beeraha badan ee beeraleyda ganacsiga
Perlite Hulticultural perlite waa nooc ka mid ah walxaha granular cad oo leh qaab -dhismeedka malabka gudaha ka dib markii hore loo kululeeyay macdanta perlite ka dib gubitaanka heerkulka sare ee degdegga ah. Mabda'diisu waa: macdanta perlite waa la jajabiyaa si ay u samaysato ciid macdan oo cabbir gaar ah leh, ka dib marka hore loo kululeeyo Kuleylka kuleylka, kuleylka degdegga ah (ka sarreeya 1000 ° C), qoyaanka ku jira macdanta ayaa uumi baxa, oo ku sii fida gudaha macdanta vitreous -ka jilicsan , wax soo saarka macdanta aan macdanta lahayn oo leh ballaarinta mugga 10-30 jeer.
Horudhaca perlite -ka beeraha
Isticmaalka perlite -ka beeraha
perlite -ka beeraha ayaa si weyn loogu adeegsan karaa dhismaha mashaariicda cagaaran sida cagaarka magaalada, xannaanooyinka beerta, beerista cawska, beerista geedka weyn, jardiinooyinka saqafka, meelaha baabuurta la dhigto ee dhulka hoostiisa, jidadka deegaanka iyo buundooyinka, hoolalka qorraxda, dhirta dheriga beerta, beeraha dhaqaaqa iyo milixda -alkali hagaajinta dhulka, waxayna ku habboon tahay beerista Ciidda ee ubaxyo iyo geedo heerkoodu sarreeyo iyo dhirta dhaqaale ee aan wasaqda lahayn waa agabka dhirta ugu fiican ee beerista beeraha deegaanka.
Faa'iidooyinka perlite ee beeraha
1. Qoyaanka waxtarka leh wuxuu gaarayaa 45%, kaas oo si wax ku ool ah u joojin kara biyaha roobka.
2. Markay biyo ka dhergaan, culeysku waa 450-600kg/m3 (guud ahaan carradu waa qiyaastii 1800kg/m3), taas oo si wax ku ool ah u xallisa dhibaatada culeyska dhismaha dhismaha.
3. 100% substrate beerista inorganic saafi ah, tilmaamayaasha jirka iyo kiimikada deggan, looma baahna in la beddelo ciidda si loo beero dhirta muddada-dheer.
4. Isuduwaha isku -dheellitirka biyaha waa 200mm/hr, kaas oo si wax ku ool ah uga fogaan kara khataraha dhibka.
5. Nadiif ah oo aan ur lahayn, fududahay in la dhiso oo ku habboon in la dayactiro.
6. Porosity -ka badeecaddu waxay si weyn kor ugu qaadaa koritaanka iyo kobcinta nidaamka xididdada xididdada leh ee dhirtu, waxay saamayn fiican ku leedahay geedaha, isla mar ahaantaana waxay ka adkaataa waxyeellada xididdada ugu waaweyn geedka ee dhismaha dhismaha.
Mabda'a arjiga ee perlite -ka beeraha
Perlite Hulticultural perlite waxay leedahay shaqooyinka soo socda ee beerista:
1.Dhici qaab dhismeedka gudaha ee maaddada oo ilaali is -weydaarsiga caadiga ah ee biyaha, gaaska iyo bacriminta;
2.In la yareeyo cufnaanta weyn ee gaadiidka fudud iyo ku -tallaalididda;
3. Joogtee dhisme substrate deggan.
Adeegsiga sifooyinka dhibka leh ee perlite, astaantan perlite waxay ku habboon tahay xididdada dalagyada si ay si qoto dheer ugu dhex gasho shaxda perlite si ay u nuugto nafaqooyinka. Daloolada perlite waxay kaydin karaan biyo aad u badan iyo nafaqooyin, waxayna siin karaan baahiyaha koritaanka dalagyada muddo dheer. Wax -soo -saarka, waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa in lagu beero dalagyo aad u tiro badan dhulka, sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa in lagu beero ubaxa iyo dhirta dheryaha ubaxa. Isla mar ahaantaana, waxay kaalinteedii habboonayd ka ciyaartay wax -ka -beddelka carrada, hagaajinta isku -dhafka ciidda, ka -hortagga hoyga dalagga, iyo xakamaynta hufnaanta bacriminta iyo bacriminta. Xayeysiinta dhif ah, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii wax lagu milan karo iyo sidaha sunta cayayaanka iyo doogga beeraha.
Cabbirka perlite -ka ee beeraha
Hore: heerkulka sare ayaa la balaariyay perlite for sale
Xiga: Hydrophobic Perlite saafi ah oo ugu fiican oo loo adeegsaday Nadiifinta Dibadda
jumlada xiran ee Perlite ee dahaarka kaamerada ...